"Ataovy mpamokatra herinaratra ny tranonareo." Elon Musk lasa adala? - SmartMe
Elon Musk dia nanaiky vao haingana fa tiany ny trano rehetra ho tonga toby famokarana herinaratra afaka mamokatra sy mitahiry angovo. Mazava ho azy, ny zavatra rehetra dia hatao amin'ny alàlan'ny vokatra Tesla. Ireo mpamokatra herinaratra eto an-toerana dia miteraka angovo ampy hamelomana ny sasany ao anaty harato.
Elon Musk lasa adala?
Tesla dia nanambola tamin'ny fampivoarana ny photovoltaics sy ny fitahirizana herinaratra efa ela. I Musk izao dia maniry an'i Tesla hanitatra sy hamadika ny tranontsika ho tambajotram-bolan'ny herin'ny masoandro.
“Ho avy mamiratra ho an'ny tambajotra Tesla sy indostrialy io. Raha tsy misy izany dia tsy ho afaka manompo ny mpanjifany ireo mpamatsy angovo, ”hoy i Musk.
Avelao izahay hampahatsiahy anao fa Tesla amin'izao fotoana izao dia tsy mivarotra angovo fotsiny, ka raha te-hividy ianao dia mila mandany vola be. Amin'izao fotoana izao, ny fametrahana photovoltaic tenany manana fahaizana 4,08 kW dia mitentina 31 eo ho eo. PLN. Ny bateria Tesla Powerwall 2 dia mitentina eo amin'ny PLN 45,5. Raha atambatra, ny drafitr'i Musk dia mitentina eo amin'ny fianakaviana PLN 76.
loharano: WP Tech
Starlink - miasa an-habakabaka avy any Elon izao! Fantatray ny fandrefesana haingana
14 Aogositra 2020
Starlink dia iray amin'ireo tetik'asa mpisava lalana maro nataon'i Elon Musk. Mendri-kaja ny hevitra - ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia miditra amin'ny Internet broadband. Efa manana ny vokany voalohany isika. Starlink dia tetikasa izay miankina amin'ny satelita ...
Vaovao vaovao mifandraika amin'ny Neuralink - hahafahantsika mandefa mozika
23 Jolay 2020
Elon Musk nanokatra ireo tsiambaratelo manodidina an'i Neuralink. Hatreto izy dia efa nampiasa ny medium-tiany indrindra, ny Twitter. Neuralink dia iray amin'ireo mpanomboka an'arivony tapitrisa izay tena mahaliana sy mampiady hevitra. Ny orinasa dia manomana fantsom-pifandraisana amin'ny solosaina ...
Elon Musk dia hanambara ny satan'ny asan'ny Neuralink amin'ny 28 aogositra amin'ity taona ity
9 Jolay 2020
Neuralink dia iray amin'ireo tsy dia fantatra fa azo antoka fa ny tena lehibe indrindra tetikasa Elona Musk. Ny mampifandray ny atidohan'olombelona amin'ny solosaina dia zavatra manelingelina ny eritreritra sy ny tahotra. Amin'ny 28 aogositra, hianarantsika bebe kokoa momba izany! Neuralink ...
Samsung Galaxy A22 5G efa voamarina. Efa manakaiky ny première